Zvikumbiro zveiyo iPhone | IPhone Nhau (Peji 6)
Dr. Cleaner, bvisa zvakapetwa zvinofambidzana uye mapikicha kubva kune yako iPhone
Dr. Cleaner chishandiso cheIOS -iPhone uye iPad- iyo inobvumidza iwe kudzima makopi mafoto uye mafoni uye nekudaro uine yakawanda yemahara yekuchengetedza
HomePass, iyo app iyo Apple yakanganwa kuwedzera kuKeKKit
HomePass yeKeKeKit ndeye-inofanirwa-kuve neapp yeavo vane Apple imba otomatiki zvishandiso uye vasingade kuve nedambudziko rekurasikirwa necodhi kodhi.
YouTube Zvemukati zvemukati zvichatarisirwa nevanhu kwete nemaalgorithms sepakutanga
Mumwedzi yapfuura, vazhinji vedu takave vabereki vakarega kubvumira vana vedu kushandisa ...
Apple inotipa iyo inonakidza puzzle mutambo Starman kuburikidza neApple Chitoro app
Kana iwe uchida kuchengetedza 4,49 euros iyo iyo Starman mutambo weiyo iOS inodhura, iwe unogona kutora mukana wekuti Apple inotibvumidza kurodhaunura mahara kuburikidza neApple Chitoro app.
Darika Izwi 2, mini mitambo yemitambo kune vese vashandisi
Darika Izwi 2, sarudzo yemaminigames emazwi ekuvandudza eSpanish ayo anoita kuti uve nenguva yakanaka munzira yakapusa uye yakasununguka.
Iwe unogona ikozvino kutamba Fortnite pane yako iPhone uye iPad pasina kukokwa
Icho chave chiri chimwe chakakurumbira kuburitswa kwegore. Mutambo uyo wanga uchitsvaira mavhidhiyo enyaradzo kwenguva yakareba pakupedzisira ...
Adobe Photoshop Express inovandudzwa nesarudzo nyowani kana uchichengeta mifananidzo
Iyo inonakidza Adobe Photoshop Inotsikisa pikicha yemuchina ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera chimwe chinhu chinodiwa nevazhinji vashandisi veichi chishandiso pavanenge vachichengeta mapikicha avo akagadziridzwa.
PUBG inogadziridzwa nemitauro mitsva, kusanganisira Spanish
Mutambo wePUBG uchangobva kugashira nyowani nyowani umo unozopedzisira wawanikwa muchiSpanish, pamusoro pekuvandudza mashandiro pane zvishandiso zvekare.
Marvel Strike Force inosvika kuti iwe unakirwe magamba ako aunofarira pane yako iPhone
Isu takaedza mutambo wevhidhiyo wakasvika mazuva mashoma apfuura paApple App kuti ukwanise kusarudza magamba ako aunofarira uye mushande pamwechete kupedzisa mamishini avo.
Apple yatanga chirongwa cheTV muMexico
Apple ichangotanga chirongwa cheTV muMexico, kuti iunze pamwechete mushando imwe yese masevhisi ekushambadzira aunayo pane chako kifaa.
ARKit-inoenderana mashandisiro, kunyanya mitambo, inounganidza mamirioni gumi nematatu kurodha pasi
Mwedzi mitanhatu mushure mekutanga kweIOS 11, uye yakawedzera chaiyo chikuva ARKit, iyo yakaunganidzwa kurodha mumitambo inoenderana uye maapplication anosvika mamirioni gumi nematatu.
Mini Gorofu King, imwe yeakanakisa mini gorofu mitambo inowanikwa paApp Store
Kana isu tiri kutsvaga mutambo kuti unakirwe Mini Gorofu, Mini Gorofu King ndomumwe wemitambo yakanakisa yatinogona kuwana muApp Store nhasi.
Mapeji, Numeri, uye Keynote zvakare anovandudzwa nezvitsva maficha
Vakomana vekwaCupertino vatora mukana wekupemberera iyo iPad 2018 mharidzo yekutaura kuvhura nhevedzano yezvishandiso zvavo zvine chinangwa chedzidzo, kunyange zvisiri zvega.
Mapikicha uye GarageBand inogadziridzwa newedzidzo maficha
Apple yakaburitsa maviri matsva ekuvandudzwa kune maVideo uye GarageBand kunyorera, matinowana mabasa matsva anoitirwa dzidzo.
Spotify anofungidzira kuti pakupera kwegore ichave iri pakati pevane makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vanonyoresa kubhadhara
Spotify fungidziro yehuwandu hwevanyori vanonongedza kuti panopera gore, kambani inogona kunge iine pakati pevane makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vanobhadhara.
iBooks inogona kuuya kuIOS 12 nekutaridzika uye kunzwa senge kuApp Store
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti chitoro chebhuku cheApple, iBooks dzinogona kugadziriswa zvakanyanya nekuuya kweIOS 12, iine basa rakafanana uye chitarisiko kuApp Store yazvino.
Iyo Android Wear app inonzi zita Wear OS
Mushure mekushandurwa kwezita zviri pamutemo, kubva kuApple Wear kuenda kuWear OS, Google ichangoburitsa mhinduro yekushandisa iyo yatotiratidza zita racho.
Google Mepu inovandudzwa uye inokubatsira iwe paunenge uchichengetera tafura paresitorendi yaunofarira
Google Mepu yeIOS inowedzera mashandiro matsva: ikozvino tichava neruzivo rwechokwadi-nguva nezve mamiriro eresitorendi yatinoda kushanyira
PUBG Mobile inokonzeresa kunzwa uye pane zvayakanakira
PUBG yemidziyo nhare yave kuwanikwa uye iri imwe nzira yakanakisa (kana kuwedzera-ku) kuFortnite, ichidarika icho chaicho uye mutambo wemitambo.
App yeApple Chitoro ingango nyatso kugadziridzwa
Iyo Apple Chitoro chishandiso chakagadziridzwa mushure mekupedzisira kugadzirisa ichiwedzera nyowani tabo pamwe nekubvisa zvimwe zvezvinonyanya kushandiswa nevashandisi.
Teregiramu inosvika 200 mamirioni vashandisi ine nyowani uye inonakidza yekuvandudza
Iyo Teregiramu yekushandisa ichangobva kugamuchira nyowani nyowani nenhamba hombe yeNhau, kupemberera kuti vasvika mamirioni mazana evashandisi.
Namatira 2 yave kuwanikwa yePadad
Mushure mekubudirira paMac, vakazivisa yavo app yeIOS nguva refu yapfuura. Ikozvino zvairi chirongwa chakaburitswa muApp Store, mwero wekuvandudzwa unogara uripo uye kuvandudzwa kunoshamisa.
Fortnite gwara revatangi, kana maitiro ekugara anopfuura maminiti mumutambo wegore
Matipi ekutanga kune avo vatsva kuFortite uye vanoda kunakidzwa nemutambo uyu urikukonzera kunzwa. Kupi kumhara, zvombo zvipi zvekutora ... zvese zvaunoda kuti urege kuurayiwa kana uchangosvika.
Maitiro ekudzima Facebook account
Kuchengetedzwa kweFacebook uye zvakavanzika zvinokanganiswa. Pano tinotsanangura maitiro ekumisa kwechinguvana uye maitiro ekudzima zvachose yako Facebook account.
Fortnite inowana mari inosvika mamirioni 1,5 emadhora mumazuva mashanu chete
Hatina mubvunzo kuti ndiwo mutambo urikutsvaira App yeApple izvozvi uye iri ...
iCleaner Pro, iko kunyorera marara uye kugadzirisa yedu iPhone, ikozvino inowirirana neIOS 11
Iyo yakanakisa tweak, iCleaner Pro, yatovepo kune iOS 11, saka kana iwe wanga wakamirira iyo nguva yekuchenesa yako terminal, unogona kuzviita pasina matambudziko ehukama.
Google Lens yave kuwanikwa ye iPhone nePadad
Google Artificial Intelligence inouya kuIOS. Uye zvinoita saizvozvo neGoogle Lens, rimwe remabasa ayo anokupa iwe rumwe ruzivo nezve ako mapikicha.
Spotify ichave nezwi rekutsvaga kuti ikubvunze iwe mimhanzi pane iyo iPhone
Mazuva mashoma apfuura takaona kuti Spotify angave achitamba sei nepfungwa yekuburitsa mutauri wayo, uye kuva, kune iye mutauri, chii chinonzi Apple Music kune iyo HomePod. Kana iwe ukawana mutauri wako wega, zviri pachena kufunga kuti ichave neimwe nzira yekudyidzana, uye zvinoita sekunge zvese zvinoratidza kuti zvichave nezwi redu.
Niantic ikozvino inotibvumidza kuwana Pokémon GO needu maFacebook neGoogle maakaundi
Niantic, anovandudza Pokémon GO, anotobvumidza iwe kubatanidza zvese Facebook neGoogle account.
Kutamba Fortnite neiyo iPhone X
Fortnite yave kuwanikwa yeIOS uye mu iPhone News isu takakwanisa kuyedza. Isu tinokuratidza muvhidhiyo mashandiro ayo pa iPhone X
Swiftkey inotangisa turu yekushandisa mune yazvino kuvandudza
Khibhodi yeMicrosoft, Swiftkey ichangobva kuvandudzwa, ichivandudza mashandiro ayo zvakanyanya kana zvichibvira uye nhamba yesarudzo yatakatipa kusvika zvino.
Fortnite yeIOS yave kuwanikwa, tinokuratidza maitiro ekuwana kokero yekutamba
Vakomana vanobva kuEpic Games vanotanga Fortnite yeIOS, hongu, isu tichafanirwa kumirira mutsara chaiwo wekutamba. Isu tinokuudza iwe kuti utange sei kutamba Fortnite yeIOS.
WhatsApp haizogoverane ruzivo rwako neFacebook, for now ...
Vakomana vanobva paFacebook vanovimbisa kuti WhatsApp haigovane data navo kudzamara vaita zvinodiwa nemutemo weEuropean.
Tora clipboard yako kwese kwese nePaste 2, yava kuwanikwa paIOS
Iko kunyorera kweMac, Namatira 2, ichangomharawo kune iOS, saka tinogona kutarisa zvese zvirimo zvakachengetwa paMac yedu kubva ku iPhone yedu uye zvinopesana.
Isu tinotsanangura nzira yekuvharidzira vashandisi paTeregiramu. Maitiro ekuziva kana iwe wakavharirwa uye, mukuwedzera, kuzivisa vashandisi, chiteshi uye mapoka senge spam.
Overcast, imwe yeakanakisa maapplication ekuteerera podcast, inogadziridzwa nenhau dzinonakidza
Iyo inozivikanwa Overcast podcast app inovandudzwa nekuwedzera inonakidza nyowani basa inopfupisa iyo podcast yatiri kuteerera.
Iyo Google Assistant app ikozvino inowirirana neiyo iPad
Mubatsiri weGoogle, Google Mubatsiri, achangomhara pane iyo iPad, kuti tikwanise kuishandisa zvakare kubva kune yedu iPad chero nguva.
Nyora, gadzira uye gadzirisa mameseji eTXT pane iPhone uye iPad yemahara
Kutsvaga yakajeka yemavara edhita kune yako iPhone kana iPad? Kana iwe uine iOS 11 yakaiswa pakombuta yako, Textor ndizvo zvawanga uchitsvaga
Iyo Alexa kunyorera iPad inokutendera iwe kuti ufonere kuAmazon Echo kubva kuIpad
Yazvino gadziriso yeiyo Alexa application inotibvumidza isu kufona nenzwi pakati peiyo iPad neAmazon Echo zvishandiso zvatakabatana nazvo.
Marline, Anwendung akanakisa kuona mafizi, mwedzi nemamiriro ekunze
Marline chirongwa umo iwe unogona kutarisa mafungu, chikamu chemwedzi uye mamiriro ekunze neimwe nzira. Nenzira yakapusa uye yakanaka. Chinhu chakaita kuti ndide murudo pandakatanga kumuona.
Iwo akanakisa password mamaneja eIOS
Kana iwe uchiri kufunga kuti password mamaneja haabatsire pane zuva nezuva-zuva hwaro, pazasi ini ndinokuratidza iwe kuti ndeapi akanakisa epassword mamaneja uye ndeapi makuru mabasa avo.
WhatsApp inowedzera nguva yaunogona kudzima mameseji
Apple inowedzera nguva yatinogona kudzima iyo yatinenge tatumira. Isu tinotsanangura kuti tingazviita sei uye nekudaro tinodzivirira matambudziko nekuda kwemeseji isina kururama
MacTracker yatotipa ruzivo nezve iyo HomePod
Iyo MacTracker application ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera ruzivo rwese rwakanangana nechazvino chigadzirwa icho Apple yatanga pamusika, iyo HomePod.
Elk, shanduko huru yemari uye hunyengeri hukuru
Kune mashandisirwo akanyatsogadzirwa uye akanaka zvekuti zvinonyadzisa kuti usazvishandise kakawanda. Elk ndeimwe yeaya maapps kwandiri. Basa rayo chete ndere kushandura mari uye ichi hachisi chinhu chandinoda muhupenyu hwangu hwezuva nezuva.
Bobby, nzira yakapusa yekuchengeta kunyorera kwako
Bobby ndeye yemahara kunyorera maneja ye iPhone. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuchengeta zvese zvaunobhadharisa iwe zve masevhisi zviripo
Snapchat uye Instagram Nhau zvichave zvakare kuwanikwa paNetflix
Vakomana veNetflix, kure nekusiya kwavo kunyorera, vanoramba vachiwedzera mabasa matsva senge chitsva chinotevera chinosvika mumavhiki mashoma, Nhau dzeNetflix, inokurumidza uye yakapusa nzira yekutarisa zvirimo zvitsva pasina kushandura iyo smartphone
Google inosimudzira Zuva reMario musi waKurume 10 paGoogle Mepu
Vakomana vanobva kuGoogle vari kugadzirira kupemberera Zuva reMario nekuva mumwezve hunhu hweakakurumbira Mario Kart kuburikidza neGoogle Mepu.
Kuwedzeredzwa kunokwidziridza yako Instagram Nhau kune chinoshamisa chikamu
Kune avo vanonyanya kudzvanya vashandisi ve Instagram, Kuburitswa kunozvarwa, chishandiso chaunogona kugadzira chinonyanya kunakidza uye hunyanzvi Instagram Nyaya.
Kufamba kwebasa kunovandudzwa nekuwedzera iyo chifanho chemask basa
Workflow, iyo application iyo inotibvumidza isu kugadzirisa mashandiro pane iyo iPhone, iPad uye Apple Watch, ichangogamuchira iyo nyowani nyowani ine nyowani yemufananidzo mask.
Tora Super Mario Mhanya pahafu yemutengo nekuda kwekusimudzira kweNintendo
Nintendo yazivisa kutengeswa kutsva kweSuper Mario Run, kutengesa kuchatanga musi waKurume 10 uye kuchavepo kusvika musi wa25.
Google Mepu inowedzera Street View maonero ku11 Disney theme parks
Ivo vakomana paGoogle Mepu vanowedzera vanozivikanwa Disney theme mapaki muUnited States kuStreet View kuti tikwanise kufamba tichitenderera.
Halide, iyo inozivikanwa yekutora mifananidzo inovandudzwa nezvakawanda zvitsva zvinhu
Halide haishaye mukana wekuzvimisikidza pachayo kukwezva vashoma uye vazhinji vashandisi kuchikuva chayo, idzi nhau dzinosanganisira izvozvi.
Iyo Google application inogamuchira matsva ekutsvaga mabasa
Iyo Google app yakangowana maficha nyowani kuti tikwanise kuwana zvakanyanyisa mairi neMessage app.
Uya neImba Yako, mutambo unoshamisa wepuratifomu yemunhu wese
Hunza Imba Yako, mutambo mutsva wepuratifomu uyo ​​uri kubudirira mune ese epamusoro ekunyorera uye izvo zvinonyanya kunakidza.
Vamwe vanoshandisa mamirioni makumi masere neshanu veSpotify vanoshandisa iyo Mahara account, uye yeizvi, zvinoita sekunge boka rinoshandisa shanduro dzakashandurwa dzeSpotify dzinobvumidza kupfuura izvo zvisingakwanisike zvebasa remahara iri.
Waze inogadziridzwa nekuwedzera kunatsiridzwa kune ipfupiso nzira
Vakomana paWaze vanovandudza imwe yeakanakisa mabhurawuza eIOS nekuvandudza iyo ETA skrini patinogona kuona pfupiso yenzira yatiri kutora.
Iwo Wepamusoro Lower Mutambo, uri nyore asi muropa mutambo nezve pamusoro pemibvunzo
Kutsvaga kweGoogle kunoratidzira zuva nezuva ndizvo zvinonyanya kufarira uye nezvinonetsa zvevanhu pasi rese. Nekudaro, hazvina kumbobvira zvaitika kwatiri tisati taita uyu mutambo wevhidhiyo kana chigadzirwa chevaraidzo senge Iyo Yakakwira Yezasi Mutambo.
Kurangarira, pakupedzisira, password password ini yandaida
Remembear chirongwa chekugadzirisa nekugadzira mapassword kubva kune vanogadzira TunnelBear, imwe yeakanakisa masevhisi eVPN andakaedza.
Google inosimbisa kuti iri kushanda kugadzirisa iyo Inbox app kune iyo iPhone X
Google's Inbox application, iyo iyo yainoda kuti isu tirambe tichirongeka mubhokisi redu reinbox, haisati yagadziridzwa kune iyo iPhone X, kunyangwe zvinoenderana nekambani iri kushanda pairi.
Calzy 3, haingori imwe Calculator yeIOS
Iwe unoda Calculator app yeiyo yako iOS kifaa? Zvakanaka, tarisa paCalzy 3, karukureta isingakusiye usina hanya
Vanoverengeka vanoita zvematongerwo enyika vanodaidzira kurwisa Apple nekushandisa kweNational Rifle Association
Vanoverengeka vekuAmerican vatambi vatanga kukumbira kurwisa Apple, kwezuva rimwe chete, kubvisa iyo Apple TV application kubva musangano iri.
Basa rekuchengetedza tweets pa Twitter rave kuwanikwa mune yepamutemo app
Basa rekuchengetedza matweets ekuverenga gare gare zvakananga mukushandisa kweTwitter rave kuwanikwa kune wese munhu. Tinokuratidza kuti zvinoshanda sei.
Google Drive inowedzera huwandu hwemafomati anotsigirwa nechishandiso cheIOS
Google's gore rekuchengetedza sevhisi rakangowedzera kuenderana nemamwe mafomati, kuti tikwanise kuzviongorora tisina kudhawunirodha zvirimo nekurivhura neyechitatu-bato kunyorera.
iTunes Store icharega kushanda muWindows XP uye Vista musi waMay 25
Kubva Chivabvu 25, iTunes haichakwanise kubatana neTunes Store pane ese makomputa anotarisirwa neWindows Vista, kuwedzera paWindows XP.
Kutevera zvichemo zvemushandisi, YouTube yeApple TV inogadziridzwa nekuwedzera kunyorera kuona
Mushure mekunyunyuta kwevashandisi kukumbira zvakare grid yekunyorera muYouTube app yeApple TV, YouTube inoigadzirisa uye ichiita kuti iwanikwe zvakare neyakagadziridzwa nyowani.
Ghostbusters iri kuuya kuIOS muchimiro chePokémon Go!
Iwo maGhostbusters anouya kuIOS muchimiro chePokémon Go!, Sarudza kutora ese mweya.
Mumwe wevatangi veWhatsApp, anoisa 50 mamirioni emadhora muChiratidzo
Iyo yakachengeteka yekutaurisa kunyorera Signal, ichangobva kugamuchira mari yemamirioni makumi mashanu emadhora kubva kune mumwe wevakavamba veWhatsApp
1Password inowedzera basa rinokuudza kana password yako yaburitswa
1Password inowedzera basa nyowani rinozokubatsira iwe kuziva kana password yako yakanganiswa paInternet.Uye kwave kuri kuvonga kumugadziri wePwned sevhisi.
Mhoro. ndiyo purogiramu yaunoda kuongorora Mac.
Nhoro. Unogona kuyera rwechipiri-ruoko maMac kunge nyanzvi. Iwe unowana kukosha kweMac nemibvunzo mishoma uye iwe uchave unobudirira nekutengesa chero kupi.
Vagadziri vanogona ikozvino kuratidza kusvika gumi screenshots avo maapp
Apple yakawedzera huwandu hwema screenshots anowanikwa kune vanogadzira kuti vape sekushandisa kwavo, kubva pa5 kusvika 10.
Cabify inovandudzwa neye nyowani dhizaini uye graphical interface
Iko kunyorera ndeimwe yesimba ravo, saka vafunga kuigadziridza kuti irambe iri padanho uye nekupa akanakisa emushandisi ruzivo.
Twitterrific yakagadziridzwa ichiita kuti ienderane nekudhonza uye kudonhedza basa reIOS 11
Iyo Twitterrific application yakangovandudzwa zvakare nekuwedzera iyo yekudhonza uye yekudonha basa, basa rinotibvumidza isu kukwevera zvirimo zve Twitterrific kune imwe chete paIpad.
Iri bhuku Fariña rakaiswa senge rinotengesa zvakanyanya maBooks Chitoro mushure mekupamba kwake kwekutonga
Mushure mekubira kwekuchengetedzeka mushure mekunyunyuta kweyaimbova meya weO Grove webhuku Fariña, iro basa rakave bhuku rakatengwa zvakanyanya muBooks Chitoro.
Dropbox inogadziridzwa nekuvandudza iyo Kugovana basa
Iyo Dropbox yekuchengetedza sevhisi inoenderera nekuvandudza mashandiro uye sarudzo dzainotipa isu patinenge tichitaurirana nemafaira atakachengeta muaccount yedu.
Zvinhu zvinogadziridzwa nemabasa matatu matsva uye anonakidza
Izvo Zvinhu 3 kugadzirwa kwesicelo yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.4 ichiwedzera matatu anonakidza maficha maficha kune avo vashandisi vasati vafunga kutenga iyo app.
Alto´s Odyssey yave kuwanikwa pane iPhone, iPad uye Apple TV
Alto's Odyssey nhasi tinogona kuikanda muApple App yeese iPhone nePad, uye hongu, chitarisiko chakanaka paTVOS yeApple TV.
Nuance Swype keyboard inoti wonekana
Iyo Swype keyboard yakamiswa yeIOS uye Android. Nuance, iye musiki, afunga kutarisa kune zvimwe zvinhu nekuzvisiya.
Nike + Run Club inovandudzwa nekuwedzera mitsva mitsva kutikurudzira kuti tiite mimwe mitambo
Vakomana veNike + Run Club vanogadziridza yavo app yeIOS kuitira kuti tigone kugadzirira kushanda kwezhizha, kuhwina mibairo mitsva uye kukwikwidza nenharaunda yeNike +.
Google Calendar inotitendera kuti tiwedzere kusvika kumatatu akaundi maakaunzi
Iko kunyorera kubata Google khalendari pane iyo iPhone, Google Calendar, ichangobva kuvandudzwa ichitibvumidza isu kuti tiwedzere anosvika matatu maakaunzi eGoogle, pamwe neakarenda avo.
Google Mepu yeIOS inovandudzwa nemabhatani matsva eruzivo
Google Mepu yeIOS inogamuchira inonakidza kwazvo yekuvandudza. Inotiunzira mapfupi matsva pane peji remba izvo zvinotibvumidza isu kuona masevhisi, mamiriro emigwagwa kana veruzhinji kutakura
Shazam inovandudzwa new design uye kuwedzera mabasa matsva
Yekutanga kudzoreredza kuShazam kubvira kutengwa kweApple, inotipa mushandisi mushandisi pamwe nemabasa matsva
Kubva muna Kubvumbi, zvese zvitsva zvinoshandiswa zvinofanirwa kuchinjiswa kune iyo iPhone X
Zvese zvitsva zvinoshandiswa zvinosvika paApp Store kubva mumwedzi waKubvumbi, zvinofanirwa kuchinjaniswa hongu kana hongu kune iyo nyowani skrini fomati yeiyo iPhone X
Mifananidzo Shamwari, Microsoft nyowani yekushandisa kutumira mapikicha kuPc
Kutenda kune iyo nyowani Photo Companion application, kuendesa iyo mifananidzo kubva kune yedu iPhone kana iPad kune iyo Windows 10 PC iri nyore kwazvo uye pamusoro pebasa rese rinokurumidza.
Flipboard CEO inoti Apple's News app yakadzika midzi munguva yakapfuura
Sekureva kwa CEO weFlipboard, Apple yakagara mune yakapfuura neNews application, sezvo ichipa iwo mabhenefiti akafanana nepuratifomu yayo zvese kana zvasvika pakugovana zvinyorwa uye kana uchigadzira mari.
Iyo Spark mail mutengi inovandudzwa kugadzirisa zvikanganiso zvakasiyana
Imwe yeakanakisa mameseji vatengi veIOS, Spark, ichangobva kugadziridzwa kugadzirisa huwandu hukuru hwezvinetso izvo chikumbiro chakapihwa mumwedzi yapfuura.
Alto's Odyssey iri kuuya kuIOS uye tvOS muna Kukadzi 22
Isu tinorangarira kuti Alto's Odyssey yakaziviswa kweinotevera Kukadzi 22 mushure mekunonoka kwayo kwakawanda.
VLC inosvika vhezheni 3.0 nerutsigiro rweApp Files uye FaceID
Iyo yakanakisa vhidhiyo faira player yeIOS, uye chero chero chikuva, ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera rutsigiro rweFaceID, dhonza uye udonhedze uye iyo Files application.
Kuedza Mario Kart yeIOS kunenge kuri kwemahara, Nintendo anoshandisa nzira imwecheteyo neiyo Super Mario Run
Zvinoratidzika kunge zvakapa mhedzisiro neSuper Mario Run apo iyo yeJapan femu inofunga kushandisa nzira imwecheteyo mumutambo wayo mutsva weIOS yakavakirwa pana Mario Kart.
Twitter inovhara iyo yekutanga kota ine purofiti munhoroondo yayo
Kwenguva yekutanga mumakore gumi nemaviri ekuvapo, iyo microblogging social network yakaita purofiti mukota yekupedzisira ya12.
Tsamba yemicrosoft yeMicrosoft, Outlook, ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera huwandu hukuru hwekuvandudza kana uchitsvaga kubva kunyorera, zvigadziriso zvichaitwa zvishoma nezvishoma.
YouTube Studio inogadziridzwa kuti ienderane neiyo iPhone X
Yazvino yekuvandudza yeYouTube Studio application haina chete kutipa kuenderana neiyo X X, asi zvakare inotipa isu kuvandudzwa mukushanda kwe manejimendi ezvekutaura zvemavhidhiyo edu.
Kugovaniswa kwevana zvinonyadzisira kuburikidza neTeregiramu ndicho chikonzero chekubviswa kwayo kwenguva pfupi kubva kuApp Store
Vhiki mushure mekubviswa kusinganzwisisike kwekushandisa kweTeregiramu kubva kuApp Store, isu pakupedzisira tinoziva kuti chikonzero chaive chii, chikonzero chaive chakabatana nekuona zvinonyadzisira kwevana.
Sago Mini Shamwari, yemahara kwenguva shoma
Mutambo wepachena uyo watinokuratidza nhasi, wakanangana nevadiki vari mumba vari pakati pemakore maviri kusvika mana ekuberekwa uye unonzi Sago Mini Shamwari, mutambo wekuti vana vadiki vatange kudzidza zvimwe zvakakosha zvehupenyu.
Isu tinotsanangura kuti tingakwanisa sei kuwana WhatsApp kubva kuApple Watch, kuverenga mameseji, kuona mifananidzo kana kunyora meseji, zvese kubva kuApple Watch.
Vakomana vanobva kuYouTube TV vanopedzisira vatanga yavo yepamutemo kunyorera yeApple TV kuti tikwanise kunakidzwa kunyorera kwedu kune yakabhadharwa vhezheni yeYouTube.
Apple's Swift Playgrounds application yagamuchira nyowani nyowani uko mashandiro matsva nekuvandudza zvinowedzerwa kuitira kuti kudzidza kuronga chirongwa chiri nyore kwazvo kune vadiki uye kwete vadiki.
Iyo inozivikanwa tsamba manejimendi manejimendi application yeIOs uye Mac Polymail yakagamuchira kugadzirisa. Pakati pavo, iyo inonyanya kumira ndeyePolymail Web
Nintendo inozivisa vhezheni yaMario Kart yemafoni efoni
Nintendo inozivisa mutambo wayo mutsva weye nharembozha iyo isingave chinhu uye hapana chishoma pane vhezheni yaMario Kart iyo inosvika mu2019.
Teregiramu yakabviswa kubva kuApp Store maererano nemukuru wayo CEO akasimbisa paakaundi yake yeTwitter, pasina kusimbisa kuti ichadzoka riini.
Kana iwe uchida kuziva kuti ndiani anokutevera kana akamira kukutevera papuratifomu ye Instagram uye nenzira uzive kuti nei, muchinyorwa chino tinokuratidza akanakisa ekunyorera kuti uzive ndiani amira kutitevera pa Instagram
Basa rinotungamirwa nemaraini rakamhara paApple Mas nekuuya kweIOS 11, richangomhara kumatunhu mana matsva, saka sevhisi iyi yatovepo munyika gumi.
Iyo App Store inovandudza mitengo yayo mune dzimwe nyika nekuda kwekuchinja kwemutero
Apple yakatumira email kune vanogadzira vazivisa kuwedzera kwemutengo wezvavanoshandisa munyika dzakatambura musiyano mumitero.
Deluxe jigsaw puzzle neImba ye da Vinci
Iyo Hous da da Vinci, mutambo wevhidhiyo matinozoona kuberekwazve uye kutora rwendo rwezvishamiso zvigadzirwa zvekugadzirisa mapuzzle.
Amazon inogadziridza iyo Kindle application ichigadzirisa iyo kune iPhone X uye iyo 10,5-inch iPad Pro
Anenge mwedzi mitatu mushure mekutanga kweiyo iPhone X uye nemimwe mwedzi yakati wandei kubva pakatangwa iyo 10,5-inch iPad Pro, Amazon yakangovandudza iyo Kindle app kuti iverenge mabhuku paIOS.
Mapepa anovandudzwa nekuwedzera nyowani Chinese Nyowani Nyowani chitaridzi uye posita
Apple's inonakidza ipfupi vhidhiyo inogadzira Matipi achangowana iyo nyowani nyowani inosanganisira nyowani chitaridzi uye posita yekupemberera Chinese Nyowani Nyowani.
iOS 11.3 ichatibvumidza kusefa kuongororwa kweApp Store zvishandiso
Iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.3 ichatibvumidza isu kuenzanisa zviyero zvinoenderana nezuva ravo uye mhando.
Nintendo inomira kutsigira Miitomo
Nintendo yekutanga foray mumapuratifomu mapuratifomu yaive Miitomo, mutambo usingachazogashira rutsigiro kubva ...
Apple ichagadzirisa zvakare Mabhuku achigadzirisa iyo kune itsva dhizaini yeApp Store
Sekureva kwaBloomberg, maBooks, pamusoro pekuzopihwa zita rekuti Mabhuku muIOS 11.3, ichagadziriswa zvizere nekutangwa kweIOS 12
Instagram inowedzera kutsigira maGIF kune ayo anozivikanwa Nhau
Instagram inogadziridza mashandisiro ayo nekuwedzera rutsigiro rweGIFs neGIPHY tekinoroji kune dzayo dzakakurumbira nyaya kuti dziite kuti dziwedzere kupindwa muropa uye kunakidzwa.
DuckDuckGo browser inovandudzwa nechinhu chitsva chekudzivirira matanho
Bhurawuza reDuckDuckGo rakangovandudzwa richiwedzera zvirinani kuchengetedzeka patinotumira data kubva kuchinhu chedu kuenda kuInternet, richitidzivirira kubva pakuwana iyo ISP yedu inogona kuve nayo
TestFlight inogadziridzwa ichibvumidza kurodha kunyorera kunosvika 150 MB ine data rate
Iyo TestFlight yekuvandudza app ichangobva kuvandudzwa, ichiwedzera muganho wekurodha pasi peapps kuburikidza nedatha mbozha kusvika ku150 MB, zvakaenzana nemufananidzo uyo App Store yatipa kubva kuvhurwa kweIOS 11.
Nyarara Siri kana vashandisi vazhinji, zvigadziriso zvakawanikwa zveMangwana HomePod
Kuburikidza neicography yeIOS 11.2.5, mashandiro matsva ePambaPod uye Siri akawanikwa. Multi-mushandisi uye kugona kutaura
Hupenyu mukuparara nemutambo wevhidhiyo Izvo Zvizere zveSpark
Yakazara neSpark, mutambo wevhidhiyo urikuunganidza wongororo kubva kune nyanzvi nevashandisi pachavo.
Screeny 2.0, nzira yakanakisa yekugadzirisa mifananidzo yako pane iyo iPhone kana iPad
Uri kutsvaga yakanaka mufananidzo uye vhidhiyo maneja kune yako iPhone kana iPad? Izvo Screeny 2.0 inokupa iwe inonakidza kwazvo
Inomisikidza ajoina iyo iPhone X Rima Mode craze
Inomisikidza, mutambi akanakisa kune yedu iPhone, iPad uye Apple TV, inozopedzisira yagadziriswa pamwe neinotarisirwa Rima Mode yeiyo iPhone X
Maitiro ekumisikidza iyo nyowani nzira yerima muYouTube application yeIOS
Youtube yakagadziridzwa muApp Store inosanganisira yakasviba modhi. Isu tinokuratidza maitiro ekumisikidza kuitira kuti yako iPhone iite seyakasiyana mune yakaderera mwenje mamiriro.
Maitiro ekudzivirira edu Instagram vateveri kubva kuziva nguva yekupedzisira isu yatinoshandisa iko kunyorera
Basa idzva rakasanganisira Instagram, rinobvumira vateveri vedu vese kuziva nguva dzese kuti inguva yekupedzisira patakawana iko kunyorera. Muchikamu chino tinokuratidza maitiro atingaite basa iri.
Apple inogadzirisazve iwo maratidziro ewebhu vhezheni yeApp Store nechitarisiko chakafanana neicho cheIOS
Apple yakagadzirisa zvachose webhu interface yeApp Store ine dhizaini yakada kuteverwa kune iyo yatinogona kuwana muchitoro chekushandisa cheIOS 11.
WhatsApp yeBhizinesi inosvika, iyo Customer Service switchboards inofamba ichienda kumachata akakurumbira
Vakomana vanobva kuWhatsApp vanozopedzisira vatangisa WhatsApp yeBhizinesi, iyo chaiyo app kumakambani kupa rubatsiro rwevatengi kuburikidza neanozivikanwa mameseji meseji app.
Iyo ramangwana rebhuku rekutaurirana inonzi Universale
Pakupedzisira tinogona kuwana dhatabhesi renyika dzese, kwatinogona kuwana chero nhamba yerunhare, yevanhu kana yemakambani, kuti tikwanise kubata nguva dzese patinenge tichida, zvisinei nezano re smartphone yedu.
Siri ikozvino anotendera iwe kuti uteerere kune iyo nhau dzezuva muzita rePodcast
Apple yanga ichishanda kuwedzera basa nyowani kuna Siri nekuuya kweIOS 11.2.2: zvinokutendera kuti uterere kune zvezuva nezuva nhau mune podcast fomati
WhatsApp inodzidza nzira yekudzivirira SPAM pane yayo mameseji chikuva
Zvinosuruvarisa, zviri kuwedzera uye zvakajairika kugamuchira SPAM mameseji kuburikidza nepasirose inotungamira mameseji application: WhatsApp. Iyo kambani inotaura kuti iri kushanda kuti ideredze asi apo isu tichigona kutevedzera mamwe mazano
Iyo YouTube app ichavandudzwa ichiwedzera yakasviba modhi
Vamwe vashandisi veYouTube application, vanoti vakagamuchira gadziriso, inoverengerwa nhamba 13.01.4 inosanganisa mukana wekuwedzera nzira yakasviba kuchikumbiro, sarudzo irikusvikawo kuiyo ecosystem
Apple inoregedza uye inobvumidza vashandisi veWeChat kutumira-zvakare matipi kuburikidza neapp
Tatarisana nezvinodiwa naTencent, muridzi weWeChat, Apple inopedzisira yapa mukati uye zvakare inogamuchira matipi mukati meapp nekuregererwa kubva kuApp commissions.
IPhone maapplication kubvisa EXIF ​​data kubva kumifananidzo
Kana iwe usingakwanise kumirira kuti usvike kumba kuti ugovane mapikicha ako asi iwe uchida kudzima iyo EXIF ​​data, mune ino chinyorwa ndinokuratidza 4 mafomu ekudzima iyo EXIF ​​dhata kubva kumaphikicha atinotora ne iPhone yedu.
Iyo yekupedzisira yekugadziriswa kweiyo IFTTT kunyorera ichave yekupedzisira iyo inoenderana neIOS 9, uye nekudaro neiyo iPhone 4s, terminal iyo yekupedzisira yekupedzisira iyo yaakagamuchira yaive iyo.
Edza hunyanzvi hwako neNonstop Chuck Norris
Nonstop Chuck Norris, mutsva mutambo weArcade wakatangwa naFlaregames nehunhu hunoshamisa sehunhu hukuru, iwe ungashinga here?
Imba yekutyisa VR inounza Virtual Reality uye kutya kune yedu iPhone
Iyo inonakidza nzira yekunakidzwa nekunakirwa Virtual Reality pane yako iPhone nekuda kweImba Yekutyisa VR.
Iyo Transmit application yekugadzirisa mafaera eseva kuburikidza neFTP, ichakurumidza kusiya iyo App Store, nekuti kutengesa hakubhadhare kuchengetedza kwayo.
Mushambadzi kufarira mune yakawedzera chokwadi yakadzikira mumwedzi ichangopfuura
Zvinoenderana nedhata kubva kuApptopia, mugadziri kufarira mune yakawedzera chokwadi akadonha zvakanyanya mumwedzi ichangopfuura.
Vagadziri veApple vakawana 30% yakawanda muna 2017
Zvinoenderana neazvino dhata yakapihwa neApple, mari iyo vagadziri vakawana mukati mese 2017 yakawedzera ne30% zvichienzaniswa negore rapfuura.
Plusdede inovandudzwa pamwe nekugadziriswazve kuzere kwekushandisa
Plusdede, mutsivi wemushakabvu Pordede, achiri kuwanikwa paApp Store uye anotipa mukana wekuwana mafirimu ese uye nhevedzano iripo paterevhizheni nemumabhaisikopo. Ichi chishandiso chave kungovandudzwa neye nyowani dhizaini iyo inovandudza kudyidzana neapp uye kushanda kwayo.
Geekbench 4 inogadziridzwa nekuwedzera iyo iPhone 8 uye iPhone X kune kuenzanisa kwemhedzisiro
Iyo yazvino yekuvandudza yeGeekbench 4, inotipa isu mhedzisiro inowanikwa mune yazvino iPhone mamodheru, kuti tikwanise kuenzanisa mashandiro nemaimbo apfuura mamodheru.
Teregiramu X inovandudzwa ichiwedzera mabasa matsva
Imwe nzira kune yepamutemo Teregiramu yekushandisa, Teregiramu X, ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera mitsva mabasa uye kugadzirisa mamwe eaya anga atovepo asi asina kushanda zvakanyatsonaka.
Iyo DJI app yeIOS inoenderana neiyo iPhone X mukuwedzera kwekugamuchira iyo nyowani firmware yeiyo Spark uye iyo Phamtom 4 Pro
Iyo DJI application yekudzora Spark uye Phantom 4 Pro ichangobva kuvandudzwa kuti iwirirane neiyo iPhone X uye mukuita ichivandudza mamwe emabasa ayo uye kugadzirisa bugs.
Iyo PayPal app ikozvino inowirirana neiyo iPhone X
Iyo PayPal yemagetsi kubhadhara chikumbiro ichangobva kuvandudzwa yeIOS ichiwedzera kuenderana neiyo nyowani iPhone X uye skrini yayo ine tsiye kumusoro kwayo.
Teregiramu inozogamuchira inotarisirwa nzira yemanheru
Mushure memwedzi ingangoita miviri yekumirira, iyo Telegra mameseji kunyorera yakangovandudzwa ichiwedzera husiku maitiro eiyo iPhone X
Microsoft Edge yeIOS ichaenderana ne1Password uye LastPass
Microsoft Edge yeIOS munguva pfupi ichave iine nyowani nyowani umo iyo inobatanidza kuenderana neLastPass uye 1Password
Instagram inotangisa iyo nyowani yakakurudzirwa posvo mune yedu yekudya
Instagram inowedzera zvimwe zvitsva, uye zvine kukakavara, kutumira kurudziro kune kwedu chikafu kuitira kuti isu tishandise yakawanda nguva online.
Workouts ++ inogamuchira iyo hombe kuvandudza munhoroondo yayo
Iyo nyowani nyowani ye Workouts ++ inounza akawanda emabasa matsva atinogona kunakidzwa nekugadzirisa edu ekurovedza neApple Watch.
MacX DVD Ripper Pro, nzira yakanakisa yekubvarura DVD nekushandura mavhidhiyo mafaera
Kubvarura maDVD emhuri kana mafirimu edu hakuna kumbove kuri nyore uye nekukurumidza kupfuura neMacX DVD Ripper Pro
Koins, a minimalist mari inoshandura ye iPhone ne iPad
Iwe uri mumwe wevaya vari kushandura mari zuva rese kuti uone kana uchigona kuchengetedza mari? Koins chirongwa chinonakidza che iPhone ne iPad
Google Mepu inovandudzwa neye nyowani yekushongedza kugadzirisazve
Yazvino gadziriso yeGoogle Mepu kunyorera kweIOS kunounza kwatiri nyowani dhizaini yekubata-kumusoro ine mavara matsva
Rima remukati pikicha mupepeti inogadziridza uye inoziva RAW
Mifananidzo RAW inobvumidza mushandisi kudzora hukuru pamusoro pemufananidzo wekupedzisira unogadzirwa nemushandisi, izvozvi iro Darkroom Photo Kamuri app inotsigira iyi fomati.
Hapasisina mabhendi madema paYouTube: iyo iOS app inochinjisa vhidhiyo yacho kune fomati yechidzitiro
Iyo inotevera YouTube yekuvandudza ichataura kune anofara uye anovenga mazhenje matema, sezvo mavhidhiyo achizoenderana neiyo fomati yechidzitiro.
Mukati inouya kuIOS uye haugone kuipotsa
Playdead inotipa kubudirira kwayo Mukati mevashandisi veApple, iPad uye Apple TV. Iri basa rehunyanzvi rinozokutapa kubva panguva yekutanga.
5 inonakidza mitambo yeIOS kweanopfuura Euro
Kwemazuva mashoma, tinogona kuwana akateedzana emitambo yakaderedzwa yatinogona kuwana kweinopfuura yuro imwe muApp Store
Iwe unoda kuyedza Tidal's HiFi sevhisi zvachose mahara? Tinokuudza sei
Sezvakataurwa neThe Verge, kutanga rinotevera Zvita 25, isu tichakwanisa kuyedza Tidal's HiFi semahara kwemazuva gumi nemaviri.
Amazon inosaina chibvumirano chekutepfenyura ese eSpanish akateedzera pane yayo VOD sevhisi
Amazon yasvika chibvumirano neakanyanya maTerevhizheni terevhizheni network yekupa zvirimo pane yayo VOD sevhisi rimwe zuva mushure mekutanga kwayo
Civilization VI inouya kune iyo iPad, iro rakanakisa zano rehwendefa rako
Kubudirira VI kuri kuuya kuIpad kuti ugone kunakidzwa neimwe yeakanakisa marongero emitambo sezvausina kumbofunga nezvazvo.
Maitiro ekutarisa yeKisimusi Lottery kubva ku iPhone yako
Kana iwe usiri kuda kumirira kuti uone kana iwe wakakunda iyo Lottery kana ibwe, nemaapplication aya uchaona nekukurumidza
Wikipedia inoburitsa yakasarudzika nzira yakasviba yeOLED kuratidza
Rima modhi yauya kuWikipedia application mukuwedzera kune zvimwe zvakakosha zvakagadziriswa senge kudzikiswa kwekushandisa kwedata muIOS.
Pokèmon Go! ichaita Apple ARKit munguva pfupi
Ikozvino ndipo Niantic painobata ruoko neIOS uye inotora ARKit sisitimu yekushandisa yeiyi yakasarudzika uye muropa vhidhiyo mutambo.
Haisi chokwadi chekupa paKisimusi? NaWream zviri nyore kwazvo
Kana iwe uchiri kusaziva zvekupa muKisimusi, nekuda kweiyo Wream application tinogona kuziva nguva dzese kuti ndezvipi zvipo zvinoda shamwari dzedu.
Hangouts ikozvino inopa rutsigiro rweiyo iPhone X
Iyo Hangouts mameseji kunyorera ichangogamuchira nyowani yekuvandudza yekupa, pakupedzisira, rutsigiro rweiyo iPhone X skrini
Iyo Philips Hue app yave kugadzirirwa iyo iPhone X
Zvishoma nezvishoma, zvese zvinoshandiswa zviri kuchinjika kune iyo interface yeiyo iPhone X. Yekupedzisira yave iyo yePhilips Hue akangwara magetsi system.
Readdle Spark inogadziridzwa ichivandudza mashandiro
Nhasi uno kambani yekuvandudza yaburitsa chiitiko chakanangana nekuvandudza mashandiro ekushandisa kwayo, Spark.
Iyo yepamutemo Reddit mutengi, ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera yakakura nhamba yemabasa ekuvandudza, kunyange zvakanyanya kana zvichibvira, mashandiro ayo.
Vakomana paFirecore, vanogadzira Infuse, vachangobva kugadzirisa mitengo yekushandisa kwavo, vachidzikamisa nekuwedzera kunyoreswa kwemwedzi
Halide kamera app inovandudzwa nekuwedzera kutsigirwa kweRAW uye rutsigiro rweiyo 3D Kubata tekinoroji
Imwe yeakanakisa maapplication anowanikwa muApp Store kutora mifananidzo, Halide, ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera kuvandudza uye nemabasa matsva
NeRainbrow isu tinoshandisa edu tsiye uye iyo iPhone X kamera kutamba
Mutambo weRainbrow unotipa chiitiko chitsva chemutambo, kwatinofanira kushandisa tsiye dzedu kudzora hunhu, emoji.
Audio chat chat yeXbox iri kuuya kuIOS munguva pfupi iri kutevera
Microsoft yakazivisa kuti ichakurumidza kuunza yayo yakanyorwa uye odhiyo chat chat application, iyo inoshanda panguva imwe chete neXbox One.
Dhawunirodha uye teerera kune ese maPodcast pane yako Apple Watch neichi chishandiso
Izvi zvine chinangwa MiniCast, kupa kuwedzera kwekutakurika uye nerusununguko munzira yatinoburitsa maPodcasts edu, imwe nzira inonakidza.
Iyo indie classic INSIDE inosvika paApp Store, haugone kuipotsa
Yekupedzisira kusvika paApp Store iri PASI, uyu mutambo mukuru weindie wakashandurwa kuIOS kuitira kuti vanoziva nevasingazive vanakirwe nazvo.
Iyo Dropbox Pepa application yakagadzirwazve uye ikozvino inowedzera mitsva mabasa kune vashandisi vanoishandisa kubva kune yavo nhare kana piritsi
Google Play Music inovandudzwa kutsigira iyo nyowani iPhone X
Google inoenderera mberi nekuvandudza mashandisiro ayo kuti iashandise iwo kune iPhone X uye panguva ino vanovandudza Google Play Music kutsigira iyo nyowani iPhone.
Asphalt 8: Inovhurwa neMhepo neNew Hot Wheels Mota uye iPhone X Kuenderana
Iyo yazvino yekuvandudza iyo Asphalt 8 inotisvitsa isu: Ndege inotipa isu kuenderana neiyo iPhone X uye nyowani Hot Wheels mota
Inopfuura mwedzi mushure mekuburitswa kwayo, Google ichangoburitsa iyo Google Calendar yekuvandudza inoita kuti ienderane neiyo iPhone X
Facebook inotangisa Mhedzisiro Yenyika neakawedzera chokwadi cheMessenger
Facebook hainete kukopa zvese zvine chekuita neSpapchat, ndosaka ichitangisa iyo Mhedzisiro yeNyika, mhedzisiro mitsva yeFacebook Messenger.
Apple inozivisa kumberi kutenga system yezvibodzwa zvitsva chete
Apple ichangobva kuzivisa iyo nyowani sisitimu yekutenga uye kurodha pasi kwekushandisa nemitambo zvisati zvatanga kuburitswa kwayo kwepamutemo paApp Store.
Google inotangisa maviri matsva ekuyedza mapikicha eApp
Vakomana paGoogle vanotsunga kuvhura maviri matsva mafoto ekushandisa eIOS kuitira kuunganidza ruzivo nekuvandudza iyo AI yekambani.
Tarisa uone kukosha kwako kubhangi rako neFinScore, kubva kuFintonic
Iwe unoda kuziva here kana vachizokupa iwe iyo chikwereti kana mogeji iwe yaunoda? Tsvaga izvo bhangi rako rinofunga nezvako zviri nyore uye nekukurumidza neFintonic.
YouTube inogona kuvhura nhare nyowani yekushambadzira mimhanzi
Inotevera Kurume, YouTube inogona kuvhurisa yayo yega yekutamba mimhanzi sevhisi kukwikwidza kubva kwauri kwauri neSpotify neApple Music
Iyo RSS Feedly kuverenga inovandudzwa kuti ienderane neiyo iPhone X
Iyo yazvino yekuvandudza yeFeedly, pakupedzisira inounza isu iko kwakamirirwa kwenguva refu kuenderana neiyo nyowani skrini fomati yeiyo iPhone X mukuwedzera pakusanganisira iyo yemanheru maitiro
Guta Rangu: Kuchengeta masikati, mitambo yevana vadiki mahara kwenguva pfupi
Mutambo wemahara watiri kutaura nezvawo nhasi, Guta Rangu: Kuchengeta masikati, mutambo umo vana vadiki vachatofanira kuchengeta vana vatanhatu mukireshi
Pokémon Go inogadziridzwa kuti itambe naHoenn's Pokémon
Uye ndezvekuti mukuvandudzwa kwazvino kwePokémon Go mutambo weiyo iOS neApple zvishandiso, a ...
Newton Calendar, karenda nyowani yeIOS
Kubva kune vakagadziri vakafanana veNewton, mutengi wetsamba, Newton Calendar inouya kwatiri kuzobatsira yekutanga. Iyo yakapusa uye yakatwasuka interface.
Iyo Amazon Prime Vhidhiyo application yave kuwanikwa yeApple TV
Akawanda anga ari mwedzi yemakuhwa, kudonha uye zvimwe nezve kuvhurwa kweiyo Amazon Prime Vhidhiyo application ye ...
Google inogadziridza iyo Gmail app kutsigira iyo iPhone X
Ivo vakomana paGoogle vanozo gadziridza iyo Gmail app kutsigira iyo nyowani iPhone X skrini kuwedzera mukuwedzera rutsigiro rwe IMAP maakaunzi.
Iwo Mamwe Akafambidzana (TOC), imwe sarudzo kune yako ajenda neyakavanzika yega
Iwe unoda here app inochengetedza zvese zvakavanzika zveyaunofambidzana nawo? TOC kana Iwo Mamwe Akafambidzana inzira yakanaka kwazvo kune iri basa
Google Mifananidzo inotanga nhau dzinonakidza dzinoenderana neIOS 11
Iyo Google Mifananidzo app yatanga mutsva mutsva muApp Store inosanganisira yekukweva nekudonhedza basa reIOS 11, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva.
Microsoft inotangisa iyo browser yeEdge yeIOS isina kugadzirirwa iyo iPhone X
Microsoft browser, Edge, yatotanga kuwanikwa muApp Store, asi chete kune boka diki renyika.
Google inogadziridza Google Mepu kuti ienderane neiyo iPhone X
Ivo vakomana paGoogle vanogadziridza dhizaini yeGoogle Mepu app kuti vagadzirise iyo app kune iyo nyowani hombe skrini yeiyo iPhone X.
Microsoft ichavhura chirongwa chekufananidza mapikicha neyedu Windows 10 PC
Microsoft yakaronga kuvhura chishandiso chitsva cheiyo ecosystem kuwiriranisa mifananidzo ye iPhone yedu nePC yedu Windows 10.
Iwo akanakisa mafomu ekutora mafoto neiyo iPhone X
Muchikamu chino tinokuratidza kuti ndeapi akanakisa ekushandisa ekutora uye kugadzirisa mapikicha needu iPhone
Iyo Apple Tsigiro yekushandisa inovandudzwa neye nyowani dhizaini uye chikamu
Iyo Apple Tsigiro yekushandisa ichangogamuchira iyo nyowani nyowani umo mushandisi interface inovandudzwa uye chikamu chitsva chakawedzerwa.
Toca Hupenyu: Yakagadzikana, yemahara kwenguva shoma
Mutambo wekupedzisira unoitwa neToca Boca kuti utore mahara ndeye Toca Hupenyu: Yakagadzika, kwatinofanira kutarisira danga.
Snapchat inotsunga pamwe nekugadziriswazve kukuru kweayo app
Snapchat hairege uye inoramba ichiedza kukwezva sevashandisi vazhinji sezvinobvira, ndosaka vangogadzirisazve yavo app ...
iTunes Connect ichavhara madhoo ayo kubva Zvita 23 kusvika 27
Basa reApple rekudzokorora chikumbiro, iTunes Connect, razivisa kuti richavhara magonhi kubva Zvita 23 kusvika 27, senguva dzose
Pokémon GO inovandudzwa nekubvisa rutsigiro rwemidziyo ine iOS 8
Yazvino yekuvandudza yePokémon GO kunyorera, inotipa kuenderana neiyo iPhone X uye isina rutsigiro rwezvigadzirwa zvine iOS 8
Google inogadziridza hofisi yayo suite yeIOS nekuvandudza zvishoma
Ese maDoc uye maSpredishiti uye maSiraidhi anosanganisira kuvandudza kunoenderana ne iPhone X uye iOS 11 mune zvigadzirwa senge iyo iPad.
GRID Autosport, inosvika zviri pamutemo kune iOS
Maawa mashoma apfuura, mutambo GRID Autosport, mutambo wemujaho wemota, wakasvika zviri pamutemo kuchitoro cheIOS ...
YouTube yakazogadzirisa matambudziko ebhatiri mune yayo app yeIOS
YouTube vhezheni 12.45 pakupedzisira inogadzirisa matambudziko ekunyanyisa bhatiri kunwiwa iyo mitsva iPhone mhando dzakatambura.
Chinja izwi rako kuti rive mameseji neAlex Voice, yemahara kwenguva pfupi
Kutenda kune iyo Inonzwika Izwi application, isu tinokwanisa kunyora izwi redu kuita zvinyorwa mune inopfuura makumi matatu nemitauro mitauro nenzira inoshanda kwazvo.
Runtastic squats PRO: Matako, emahara kwenguva pfupi
Ivo vakomana paRuntastic, vanotipa isu kwenguva yakati rebei mukana wekurodha pasi maSquats PRO: Chikumbiro chemabhatani mahara.
Nakidzwa nemabhiridha ane Pool Break, yemahara kwenguva shoma
Iyo Pool Break mutambo - 3D Mabhiridha uye Snooker inotibvumidza isu kunakidzwa nemabhiridha nenzira chaiyoiyo uye kwenguva yakaganhurirwa mahara zvachose
Geekbench 4, Magic Launcher Pro uye AllPass Pro yemahara kwenguva yakati rebei
Nhema Chishanu zvakare inosanganisira kunyorera, asi pachinzvimbo chekudzikisa mutengo wavo, anowanikwa mahara
Overcast inogadziridzwa nekuwedzera nyowani yerima theme pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Iko kunyorera kwekuteerera podcast, Overcast ichangobva kuvandudzwa ichiwedzera mamwe mabasa kupfuura zvayaive iine, pakati payo iro rima tema rakamira.
Poly Bridge mutambo uri kutengeswa kwenguva shoma
Isu tinoenderera pamwe neyakaganhurirwa-nguva kupihwa kwemitambo yakati wandei uye takagumburwa pane uyo uchangoburitswa ...
Instapaper inogadziridzwa uye ikozvino inowirirana neiyo iPhone X
Kana zvasvika pakuchengetedza zvinyorwa zvatiri kuda kukurukura kuti tizoverenga gare gare, kuzvinyora pabasa kana kungoita ...
Pixelmator inogadzirisirwa iyo iPhone X uye inoderedza mutengo wayo kusvika 1,99 euros
Iyo yekuvandudza yePixelmator yakaderedza mutengo kusvika ku1,99 euros uye yakagadziridza iyo application ichiita kuti ienderane neiyo iPhone X
Kuyambuka Kwezvipfuyo: Pocket Cam, tanga wasvika kune yako iPhone kutanga
Kuyambuka Kwemhuka mune yayo nharembozha vhezheni yasvika iyo iOS App Store kunopinda nechisimba nhamba yevashandisi nemaavatat madiki.
Apple inomanikidzwa kubvisa Skype kubva kuChina App Store
Kurara uko hurumende yeChina yajaira isu hakuna magumo. Iko kufambisa kwazvino kwave kuri kubvisa Skype kubva kuzvitoro zvemunyika
Nhema Chishanu zvakare inouya kuReaddle kunyorera
Vakomana vanobva kuReaddle vakasvetukira pabhendi reBlack Chishanu uye vhiki ino vanotipa maapplication avo ne50% dhisikaundi.
Mashoko ane Shamwari 2, iyo inotevera kune Zynga classic
Zynga yakabata uye yakaburitsa sequel kune imwe yemitambo yayo yakabudirira, Mazwi neShamwari 2, iyo inouya neakawanda akawanda maficha.
Kuyambuka Kwemhuka: Pocket Camp iri kuuya kuApp Store munaNovember 22
Mutambo mutsva weNintendo wema mobile platforms, Animal Crossing: Pocket Camp icharova App Store musi waNovember 22.
Spotify yatove kutsigira dhizaini yeiyo nyowani iPhone X
Iyo iPhone X yakagamuchira iyo gadziriso kubva kuSpotify iyo yakachinjika kune iyo nyowani dhizaini yechigadzirwa. ikozvino yawanikwa paApp Store.
Tweetbot ichangogamuchira diki yekugadzirisa kugadzirisa rimwe rematambudziko mamwe evashandisi varo akatarisana nawo
Google inobvisa dziviriro kubva kuGoogle Drive uye hofisi yayo suite
Google Drayivu yabvisa iyo sarudzo iyo yaakatipa kuchengetedza mafaira anowanikwa kuburikidza neApp yeApp.
Google Mepu inovandudza dhizaini yayo
Google Mepu inoshandura marongero ayo uye inogadzira iyo nyowani scheme scheme. Isu tinotsanangura nyaya dzinopindira mune yayo nyowani vhezheni
Aimbova Apple Injiniya Anoburitsa Yakakwana RAW Simba Photo Mhariri yeIOS
Vanoda mapikicha vanozokoshesa kuti Apple ex yakagadzira Raw Simba yeIOS, ine simba RAW pikicha mhariri
Iko kunyorera kunakidzwa nezvose zvirimo zvePlusdede (yekare pordede) pane yedu iPhone yawanikwa muApp Store.
Mifananidzo yeGoogle ikozvino inotsigira kudhonza uye kudonhedza
Ivo vakomana paGoogle vachangobva kuburitsa nyowani nyowani kuGoogle Mifananidzo ichiita kuti ienderane nekudhonza uye kudonhedza basa reIOS 11 pane iyo iPad
Iyo YouTube application yeIOS iri kukonzera matambudziko akakomba ekushandisa bhatiri uye kupisa
Vamwe vashandisi veYouTube application yeIOS vanoti application inogara kumashure ichidya bhatiri uye ichidziisa mudziyo
Firefox inovandudzwa neyemutsva minimalist dhizaini
Iyo yazvino Firefox yekuvandudza inotipa iyo nyowani dhizaini uye mashoma mabasa anotibvumidza isu kufamba nenzira inokurumidza nzira
Twitter inowedzera huwandu hwevatambi muzita rezita
Twitter haina kungowedzera huwandu hwevatambi mune yega tweet, asi zvakare yakawedzera huwandu hwevatambi muzita rezita
Mavhidhiyo anovandudzwa nekuwedzera vatambi veStar Wars, kuenderana kweICloud uye zvimwe zvakawanda
Iyo nyowani yeVhidhiyo clip inounza isu zvakasarudzika mashandiro eiyo iPhone X pamwe nezvitsva zvemukati zvine chekuita ne Star Wars uye zvimwe zvitsva
South Park: Foni Muparadzi, ikozvino yawanikwa paApp Store, y'now?
South Park: Foni Muparadzi yave kuwanikwa paApp Store kuti urambe uchinakidzwa nenyaya dzaKyle, Cartman, Stan, Kenny uye nezvimwe
Kufungidzira kunovandudzwa nerutsigiro rweHDR
Inomisikidza 5 inovandudzwa kushanduro 5.6 inoenderana neiyo HDR zvemukati uye neiyo nyowani iPhone X, yemahara yekuvandudza yevashandisi vayo
Toca Bvudzi Salon, yemahara kwenguva shoma
Mutambo weKutamba Bvudzi Salon, uyo vana vanozozviisa pachavo mushangu dzemugadziri webvudzi, unowanikwa kurodha mahara kwenguva pfupi.
Kufamba kwebasa kunovandudzwa kuchinjika kune iOS 11 uye iyo nyowani iPhone X
Apple ichangotanga chirongwa chitsva cheiyo Workflow app kuchichinjisa kune iyo itsva saizi saizi yeiyo iPhone X uye ichiita kuti ienderane neIOS 11
Toca Chiremba mutambo wevana, mahara kwenguva yakati rebei
Nhasi tinokuratidza maitiro atinga dhawunirodha mutambo weToca Chiremba wevana mahara mahara uye nekuchengetedza iyo 3,99 euros iyo inodhura
Tweetbot yeIOS uye Mac inototsigira 280 mavara eTwitter
Mukati memaawa makumi maviri nemana ekuwedzera iwo muganho wehunhu kana uchiisa maTweets, mugadziri weTweetbot akagadzirisa app yayo kuti ienderane.
Zviri pamutemo: Twitter inowedzera iwo muganho wehunhu kusvika mazana maviri negumi
Yeshiri yekudyidzana pasocial yakangowedzera hunhu hunhu kubva pamakumi mana kusvika mazana maviri nemakumi masere nemakumi masere mavara
Tsvaga mifananidzo zviri nyore pane yako iPhone neUniversal Image Kutsvaga
Kutenda kune Yekufananidza Mifananidzo Kutsvaga Pro application, isu tinokwanisa kutsvagisa mifananidzo uye nekugovana kana kuchengeta mhedzisiro yakawanikwa.
WhatTheFont app ndiyo Shazam yetype types
Kutenda kune iyo WhatTheFont kunyorera, tinogona kuziva kubva ku iPhone yedu kuti chii zita remafonti anoshandiswa mumufananidzo.
Iyo iPhone X iri zvishoma nezvishoma ichigamuchira mamwe maapplication akagadziridzwa kune ayo matsva maficha. Readdle yakashandura maficha ayo manomwe eiyo iPhone X.
Huwandu hwekushandisa hwakashandurwa kuiyo iPhone X skrini hwakawedzera mumaawa apfuura
Kusiyana neapo yakavhurwa iyo iPhone 6 ne6 Plus, huwandu hwezvishandiso hwakashandurwa kune iyo nyowani skrini yeiyo iPhone X yakakwira zvakanyanya.
YouTube Yevana inovandudzwa nekuwedzera ma profiles ekugadzirisa iyo app kumwana wega wega
Yazvino gadziriso yeYouTube Vana inowedzera purogiramu yehurongwa yekumisikidza iyo app zvinoenderana nemwana anozoishandisa
Super Mario Run inomutsiridzwa uye inogamuchira iyo iPhone X
Nintendo yanga ichikurumidza kugadzirisa yayo inomira mutambo Super Mario Run kuti igone izvo zvitsva zveApple's iPhone X.
GarageBand inovandudzwa nenhamba yakakura yezvinhu zvitsva
Kunyorera kwaApple kwekunyora nekugadzirisa mimhanzi kuchangobva kugashira hukuru hukuru nenhamba huru yezvinhu zvitsva.
Denderedzwa, iri nyore nzira yekutumira uye kugamuchira mari kubva kune yako nhare
Circle is a multiplatform uye yemahara sarudzo yekukwanisa kubhadhara pakati pevanhu nenzira yakapusa uye isina chero mhando rekomisheni
Chikomo Kukwira 2 mutambo unovandudzwa weHalloween kuita vhezheni 1.9.0
Izuva ripi riri nani pane nhasi kunakidzwa nemitambo yatinayo muApp Store ye ...
Bug iyo yatiri kuwana parizvino mu Calculator yeese maapplication eIOS yakagadzika mune yekutanga beta yeIOS 11.2
Apple Music ikozvino inowirirana neGoogle Mubatsiri pane iyo iPhone
Yazvino yekuvandudza yeGoogle Assistant application inotipa kusangana neApple Music
Facebook yakashandura mashandisiro ayo ekupemberera Halloween nekugadzira mafirita akaiswa pazuva rino uye mutsva mutambo wekudyidzana.
Readdle's Spark yakawedzera kuvandudzwa kwakawanda mukuvandudza kwayo
Iyo yazvino Spark yekuvandudza haizoiti kuti iwe upotse chero imwe yakabhadharwa email maneja, ngatione zvavari.
Instagram inotangisa mafirita matsva eHalloween uye Superzoom yemavhidhiyo edu
Instagram yeIOS inogadziridzwa nekuwedzera zvinotarisirwa zveHalloween mhedzisiro yeNhau dzako pamwe neSuperzoom yemavhidhiyo.